राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म एउटै व्यक्ति वडाअध्यक्ष ! « Anumodan National Daily
राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म एउटै व्यक्ति वडाअध्यक्ष !
प्रकाशित मिति : 18 May, 2017
ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिका वडा नं १० को चुनावी नतिजा आएपछि एकजना वयोवृद्ध व्यक्तिले सयपत्री फूलको माला लगाए । साथमा जीवन संगिनी पनि थिइन् । अरुको सहारामा हिँड्नुपर्ने उमेरका यी हजुरबाले कुनै पार्टीको सहारा नलिइकन स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा ललितपुर महानगरको वडाध्यक्ष पड्काएका हुन् ।
अर्को अचम्म त अलि पछि पो थाहा भयो ! यी हजुरबाले वडाध्यक्ष जितेको पहिलोचोटि होइनरहेछ । उनको वडामा हजुरबाले ०२९ सालदेखि कसैलाई पनि वडाअध्यक्ष बन्न दिएकै रहेनछन् ।
ललितपुर वडा नं. १० निवासी ७७ वर्षीय नरसिंह ब्यञ्जनकार बुढेसकालमा वडाअध्यक्ष पदमा विजयी बनेका छन् । उनी पञ्चायतकाल, बहुदलकाल र अहिले गणतन्त्र कालमा पनि निरन्तर वडाअध्यक्ष जित्ने अनवरत धावक हुन् ।
स्वतन्त्र उम्मेवारका रुपमा नरसिंहले ६७६ मत पाएर जित हात पारे भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका कर्मलाल व्यञ्जनकारले ६०२ मत पाए । एमाले र अन्य दल पछाडि नै छुटे ।
व्यञ्जनकारको जित घोषणा हुनुभन्दा अगाडि नै मतगणनास्थलमा भेला भएका ज्वागलबासीहरु भन्दै थिए ‘नरसिंह बाबै रहँदासम्म कोही कसैले पनि वडाअध्यक्ष जितुँला भनेर नसोचे हुन्छ ।’
ब्यञ्जनकारले देशमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन देखे । तर, जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन आए पनि उनलाई यसले नकारात्मक असर पारेको छैन । पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म उनले निरन्तररुपमा वडाध्यक्ष जित्दै आएका छन् ।
ब्यञ्जनकारले ०२९ सालमा स्वतन्त्र उम्मेेदवारबाटै वडाअध्यक्षमा खाता खोलेका थिए । अहिले ४५ वर्षपछि फेरि स्वतन्त्रबाटै जित हात पारेका छन् ।
ठेक्कापट्टा छाडेर चुनावमा
व्यञ्जनकार ०२९ सालभन्दा पहिला ठेकेदार थिए ।
राजाको क्वार्टरदेखि टुकुचाको पुलसम्म त्यसबेला आफ्नै ठेकेदारी रहेको व्यञ्जनकार सुनाउँछन् । तर, राजाको क्वार्टर बनाउने बेला घाटा व्यहोरेपछि उनमा ठेकेदारी पेशाप्रति नैराश्यता आयो । र, उनी चुनावी राजनीतिमा रमाउन थाले ।
‘दरबारका हाकिम दानबहादुर मानन्धरले १ लाख १७ हजार रुपैयाँ मलाई दिएनन्’ व्यञ्जनकार भन्छन्- ‘राजालाई पनि भनें, तर पाइएन, त्यसपछि मलाई त्यो पेशामा रहर मर्दै गयो ।’
सुरुमा व्यञ्जनकार ललितपुरमा देवेन्द्रलाल अमात्यलाई वडाअध्यक्षमा जिताउन प्रचार-प्रसारमा हिँडेका थिए । चुनाव प्रचारकै क्रममा हिँड्दा अमात्यले टोलका केही युवालाई आफुले जितेपछि थुनामा हाल्ने भन्दै हिँडे । यो कुरामा ब्यञ्जनकार असहमत भए । उनले अमात्यलाई यस्तो नभन्न र यस्तो खालको सोच समेत नराख्न आग्रह गरे । तर, अमात्यले उनको कुरा मानेनन् ।
अमात्यले आफ्नो कुरा नमानेपछि आफूले नै स्वतन्त्रबाट उमेदवारी दिने उनले घोषणा गरे । र, चुनाव जिते । त्यो चुनौतीपूर्ण जितसँगै उनको वडाअध्यक्षको यात्रा सुरु भयो, जुन अहिले ७७ वर्षको उमेरसम्म पनि जारी छ ।
महानगरपालिकाको वडाध्यक्षमा चुनाव जितेपछि खुशी देखिएका ब्यञ्जनकारले भने -‘मलाई भन्दा बढी मेरा गाउँका बुढापाकालाई पो मैले हार्छु कि भन्ने चिन्ता थियो ।’
चुनावी मैदानको पहेली !
व्यञ्जनकारले पञ्चायती व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिको भूमिका खेले पनि परिवर्तनलाई साथ दिँदै आए । ०३६ सालमा उनले बहुदललाई समर्थन गर्न वडाअध्यक्षबाट राजिनामा ठोके ।
जनमत संग्रह सकिएपछि भएको स्थानीय निर्वाचनमा फेरि उनि निर्विरोध वडाध्यक्षमा निर्वाचित भए ।
तर, एक वर्ष काम गरेपछि तत्कालीन प्रधानपञ्चसँग उनको कुरो मिलेन । र, राजिनामा दिए ।
व्यञ्जनकार पुराना दिन सम्झँदै भन्छन्-प्रधानपञ्चले चुनावका बेला नगर पञ्चायतको भवन बनाउँछु भनेका थिए, बनाउन नसकेपछि उनलाई राजिनामा दिन भनें । तर, राजीनामा दिएनन् । त्यसपछि मैले नै आफैं राजिनामा दिएँ ।’
व्यञ्जनकारले राजिनामा दिएपछि एक वर्ष जति वडा नं १ (अहिलेको वडा नं १०) मा वडाअध्यक्ष पद खाली नै रह्यो । पछि फेरि वडाअध्यक्षका लागि चुनाव भयो । चुनावमा उनले फेरि उमेदवारी दिएर जित अरुका हातमा पर्न दिएनन् ।
पञ्चायतकालको अर्को स्थानीय चुनावमा पनि व्यञ्जनकार निर्विरोध नै वडाध्यक्षमा निर्वाचित भए । उनी वडाध्यक्ष भइरहेकै बेला ०४६ को जनआन्दोलनपछि देशमा बहुदल आयो ।
बहुदलीय व्यवस्थापछि ०४९ सालमा स्थानीय चुनाव भयो । यो चुनाबमा व्यञ्जनकारले नेपाली कांग्रेसबाट वडाध्यक्षको टिकट पाए । र, विजयी भए ।
तर, ०५४ को दोस्रो स्थानीय चुनावमा व्यञ्जनकारलाई कांग्रेसले टिकट दिएन । कांग्रेसका तत्कालीन जिल्ला अध्यक्ष ओमकार श्रेष्ठले उनलाई वडाअध्यक्षको टिकट दिन मानेनन् । र, यही रिसमा ब्यञ्जनकारले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिए र जिते । ०५९ सम्म उनैले वडा अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाले ।
त्यसपछि करिब २० वर्ष चुनाव भएन । बैशाख ३१ गते भएको स्थानीय तहको चुनावमा उनी ७७ वर्ष पु्गिसकेका थिए । तैपनि स्वतन्त्र उम्मेवार बनेर ठूला पार्टीहरुलाई हराउँदै गलामा माला पहिरिन सफल भए ।
कांग्रेसलाई हराएर वडाअध्यक्षमा निर्वाचत ब्यञ्जनकार भन्छन् ‘मलाई एक दलको होइन, सर्वदलको भोट आउँछ, त्यसैले जित्छु ।’
चुनाव जित्ने जादु के हो ?
ज्येष्ठ नागरिक ब्यञ्जनकार वडाअध्यक्ष मात्रै होइनन्, उनी टोलमा समाजसेवीका रुपमा समेत परिचित छन् । उनी वडाबासीका घरघरमा पुग्ने गर्छन् । आफूले हस्ताक्षर मात्रै गरेर हुने काम छ भने उनले कसैलाई पनि कार्यालयमा बोलाउँदैनन् ।
घरका पेटीदेखि सडकमा हिँड्दाहिँड्दै उनले जनताको काम बाटैबाट गरिदिन्छन् ।
टोलमा कोही बिरामी भयो, तर औषधि उपचार गर्ने पैसा छैन भने सबैले ब्यञ्जनकारलाई सम्झन्छन् ।
उनी भन्छन्-‘मसँग त के पैसा हुन्छ र, कोही बिरामी पर्‍यो र पैसा छैन भने डाक्टरसँग गएर नि:शुल्क जाँच्न आग्रह गर्छु, औषधिका लागि हुने खानेहरुसँग पैसा मागेर औषधि किनिदिन्छु ।’
वडामा कसैका बालबच्चा स्कुल जान पाएनन् भने त्यसको चिन्ता पनि ब्यञ्जनकारलाई नै हुन्छ । टोलका हुनेखानेहरुबाट चन्दा उठाएर भए पनि स्कुल पठाउन नसक्नेलाई उनले सहयोग गर्छन् । यही कारणले उनी वडाबासीका साथीजस्तै बनेका छन् ।
व्यञ्जनकारले वडामा ठूला-ठूला परिवर्तन ल्याउने आश्वासन बाँडेर चुनाव जितेका होइनन् । वडाअध्यक्ष भएलगत्तै आगामी योजनाका बारेमा सोध्दा उनले भने ‘वडाबासीको आवश्यकताअनुसार नै योजना बनाउँदै जाने हो, अहिले ढल र पानीको समस्या छ, तत्काल हटाउन प्रयास गर्ने छु ।’
ललितपुरको मन्त्री क्वार्टरबाट आउने ढल व्यञ्जनकारको टोलमा ‘लिकेज’ हुने समस्या छ । ज्वागलमा पानीको पनि समस्या उस्तै छ । यो तत्काल समाधान गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उनको सोच छ ।
वडाध्यक्षले शक्तिको प्रयोग हुँदैन
अहिलेको संविधानले वडाअध्यक्षलाई धेरै जिम्मेवारीसँगै अधिकार पनि दिएको छ । ब्यञ्जनकार भन्छन् ‘म वडाबासीको आवश्यकता अनुसार काम गर्छु, अधिकार भनेको टोलबासीको हितका लागि प्रयोग गर्ने हो, म त जति नै शक्ति पाए पनि मेरा लागि प्रयोग गर्दिनँ ।’
वडाअध्यक्षले शक्ति प्रर्दशन गर्ने होइन भन्ने व्यञ्जनकारको मत छ ।
अनुभवी वडाध्यक्ष ब्यञ्जनकार भन्छन् ‘गाउँघरमा कोही बदमास छ भन्दैमा उसलाई थुनामा हालेर मात्रै सुधि्रँदैन, थुनाबाट निस्केपछि फेरि त्यस्तै काम गर्छ, बरु उसलाई सम्झाउने र उसको व्यवहारमा पो परिवर्तन ल्याउने सोच्नुपर्छ ।’
‘नेता’ बन्दा श्रीमती रिसाउँछिन्
व्यञ्जनकारले ०२९ सालमा वडाअध्यक्ष बनेपछि खासै कमाएनन् । किनकि आफ्नो निजी व्यवसाय छाडेर जीवनको उर्जाशील समय उनले जनताको सेवामा बिताए ।
घर व्यवहारको जिम्मेवारी श्रीमतीको थाप्लोमा आयो । एक्ला विजेता व्यञ्जनकारले हल्का ठट्टाभावमा भने – ‘वडाअध्यक्ष बनेपछि जनताको त प्यारो भएँ, तर सम्पत्ति नकमाई टोलटोलमा डुल्दै हिँडेपछि श्रीमतीले त कराउने नै भइन् नि ।’
व्यञ्जनकारले यसो भनिरहँदा जितको खुशी साट्नसँगै रहेकी श्रीमतीले कुनै प्रतिक्रिया दिइनन् ।
अछाममा बस खस्दा एकको मृत्यु, १७ घाइते
अछाम । मंगलसेनबाट धनगढीतर्फ गइरहेको बस सोमबार मार्कुमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा एक जनाको मृत्यु हुनुका साथै
एक संक्रमितकाे मृत्यु
धनगढी । धनगढीमा रहेको अस्थायी कोरोना अस्पतालमा उपचाररत एक पुरुषको मृत्यु भएको छ । कञ्चनपुरको
एकै पटक ५४ अस्पताल सिलान्यास गरिदै
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सोमवार एकै पटक ५४ आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरिँदै छ । ग्रामीण
प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण हुँदै
काठमाडौं । संघीय सरकारले देशका सबै सात प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न लागेको छ